အလွန် အကျိုးပေးသည့် ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ ရွတ်သော ဘုရားရှိခိုး – XB Media Myanmar
လာဘ် တိတ်နေသူများ ၊ ဈေးရောင်း မကောင်းသူများ ၊ အကြွေး မရသူများ ၊ အကြွေး မဆပ်နိုင်သူများ ၊ ငွေကြေး အခက် အခဲဖြစ်နေသူများ ၊အကြီးအကဲနဲ့ အဆင်မပြေသူများ ၊ အလုပ် အကိုင် တို့လို့ တန်း လန်း ဖြစ်နေသူများ ၊ လာဒ်ရွှင်ငွေဝင် လိုသူများ အတွက် အလွန်တရာ မှ လာဒ်ရွှင်စေသော
ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်သော ဂါထာ ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ….ကိုယ်တွေ့ တစ်ခု ပြောပါရစေ… 2012.12.31 နေ့ မှာ ငွေ ၆ သိန်း ပေးပါမယ် လို့ ကတိပြု ခဲ့တာပါ.. 29.12.2012 နေ့ မှာ လက်ထဲ မှာ ငွေ ၄ သိန်း ပဲ ရှိပါတယ်.. ၂ သိန်း လိုနေတယ်လေ.. ၂ သိန်း ကို ၂ ရက် အတွင်း ဘယ်လို ရှာရမလဲ.. စိတ်ပေါက်ပေါက် နဲ့ တီဗွီ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ။
အဲဒီ မှာ ဗန်းမော် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ကုမာရ ဘိဝံသ က MRTV4မှာ ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ အကြောင်း တရားဟောနေတာ နာ လိုက် ရပြီး အဲဒီ လာဒ်ရွင်စေတဲ့ဂါထာ ကို အားတိုင်း ရွတ် မနက် ၄၅ မိနစ် ၊ ည ၄၅ မိနစ် ရွတ်လိုက်တာ 31.12.2012 နေ့လည် 2း00 နာရီမှာ ဟောခန်း မှာ ဗေဒင်ဟောနေရင်း ဖုန်းဝင်လာတယ်..
ကံစမ်းမဲပေါက်တယ်တဲ့ ၂ သိန်း ရမှာတဲ့…ဟိုက်ရှားပါး လန်းသွားပါတယ်…..
ကတိ အတိုင်း ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်….ကိုယ်တွေ့ပါဗျာ..အဲဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းဗေဒင်ဆရာ တစ်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောပြတာ သူက ပြန်ပြောတယ်.. ငါလည်း အဲဒါ ရွတ်တာ ဒီ မနက်ပဲ
အိမ်ဝိုင်းရောင်းထွက် လို့ ဆိုပြီး ၂ သိန်း လာကန်တော့သွားတယ်တဲ့…. ..တော်တော်ထူး တဲ့ ဂါထာ ပါပဲဗျာငွေကြေး အခက်ခဲ ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ များ လည်း မနက် ၄၅ မိနစ် ည ၄၅ မိနစ် ရွတ်ကြည့် ပါလား ဗျာ….ဘာ ခက်တာ မှတ်လို့ …ဒေါက်တာ ကုမာရ ဘိဝံသ(ဗန်းမော်ဆရာတော်) ချီးမြှင့်တော်မူသော ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ ၏ ဂါထာတော်။
အရဟံ၊ ဗဟိ-အန္တ-ဇယံ၊ သုဂတံ၊
အမိတံ၊ ၀ိရဇံ၊ လလိတံ၊ အတုလံ၊
စရဏံ၊ တိ-ဘ၀ူပ-သမံ၊ ယမကံ၊
(အနက်ကို ရွတ်ဆိုရန် မလိုပါ..အဓိပ္ပါယ် သိရန် ရေးပေးတာပါ… အထက်ပါ ဂါထာ ကို သာရွတ်ပါ။)
၁။ အရဟံ – ပူဇော် အထူး ကို ခံယူတော် မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၂။ ဗဟိ-အန္တ-ဇယ – အတွင်း-အပ ရန်ကိုအောင်တော် မူသော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၃။ သုဂတံ – ကောင်းသော စကားကို ဟောပြောတတ်သော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၄။ အမိတံ – မနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် တန်ခိုး ဗျာဋိဟာ
ရှိသော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၅။ ၀ိရဇံ – ကိလေသာမြူ ကင်းတော် မူသော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၆။ လလိတံ – တင့်တယ် သပ္ပါယ်တော် မူသော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၇။ အတုလံ – အတု မရှိသော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၈။ စရဏံ – အကျင့် စရဏနှင့် ပြည့်စုံတော် မူသော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၉။ တိ-ဘ၀ူပ-သမံ – ဘုံသုံးပါး ၌ ကိလေသာငြိမ်းအေးသော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၁၀။ ယမကံ – ရေမီး အစုံအစုံ တန်ခိုး ဗျာဋိဟာနှင့် ပြည့်စုံသော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၁၁။ သုခဒံ – ချမ်းသာ ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၁၂။ သရဏံ – ကိုးကွယ် အားထားရာဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၁၃။ ဇိနံ – မာန်ငါးပါး ကိုအောင်မြင်သော မြတ်စွာဘုရား ကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
လိုသလောက် မရပေမဲ့ လုပ် သလောက်တော့ ရပါတယ်…. ခင်ဗျာ……